နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: ချစ်သော စနိုးအတွက် မွေးနေ့အမှတ်တရ ကဗျာ ( ၃၁.၁.၂၀၁၃ )
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 3:42 AM
Sweety Snow January 28, 2013 at 4:27 AM
awesome creation, sis!! thanksalot :))))ဘယ်လောက်တိုက်ဆိုင်လည်းဆိုရင် ကဗျာထဲမှာ နာမည်အရင်းတောင် ပါလာတယ် :D ဒီကဗျာလေးကို တစ်သက်လုံးသိမ်းထားမယ်နော် <3 <3
မိုးနတ်ကြယ်စင် January 28, 2013 at 5:35 AM
စနိုးလေးရဲ့ နံမည်အရင်းကို မိုးနတ်လဲမသိရပါလားကွယ်...^o^
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရမ်းပဲ ပျော်မိတယ် စနိုးရေ....
မိုးနတ်ရေးပေးတဲ့ ကဗျာလေးကို စနိုးကနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ပါ :)))
မေမြို့မိုး January 28, 2013 at 4:57 AM
မိုးနတ်ကြယ်စင် January 28, 2013 at 5:37 AM
မောင်လေး နွေမိုးရေ...မတွေ့ရတာကြာပြီဟယ် :(
ချစ်ချစ်လေးနဲ့ အဆင်ပြေတယ်ဟုတ် :P
roseayemaung January 28, 2013 at 6:03 AM
ရင်ခုန်ရသူ(ကဗျာ၊အချစ်၊ဟာသ၊အလွမ်း) January 28, 2013 at 6:19 AM
အသဲလေးတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ် January 28, 2013 at 7:08 AM
ရိုးမြေကျ January 28, 2013 at 5:52 PM
အစ်မစနိုး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ။ ထာဝရသူငယ်ချင်းလုပ်ကြတာပေါ့နော်။
Thu January 28, 2013 at 8:43 PM
တတိယမြောက်သမီးတော် January 29, 2013 at 5:54 AM
ကဗျာလေး အားပေးသွားတယ် ညီမလေးရေ
မွေးနေ့ ရှင်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေနော်
မိုးသူ(တောင်ကြီး) January 30, 2013 at 7:51 PM
မိုးနတ်ရေ စနိုးအတွက် ရေးပေးတဲ့ ကဗျာလေးက ချစ်စရာလေး
မိုးနတ်က ဘလော့ဂါ ညီကိုမောင်နှမတွေကို
တော်တော်လေးချစ် တော်တော်လေး ဂရုစိုက်တယ်နော်
မိုးနတ်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးကို ချီးကျူးပါတယ်
အိပ်မက်ကောင်းကင် January 30, 2013 at 9:57 PM
ကဗျာလေးကကောင်းမှကောင်း ပါလား မမမိုးနတ်ရေ
မွေးနေ့ရှင်နဲ့အတူ မမမိုးနတ်လည်း ထပ်တူပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေနော်
မိုးညချမ်း February 1, 2013 at 5:53 AM
အရမ်းကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ကဗျာလေးပါ မမရေ ... စနိုးရဲ့မွေးနေ့ကိုတောင် မသိလိုက်ဘူးရယ် ... သိရင် ညလေးလည်း ကဗျာတစ်ပုဒ်လောက်ရေးပေးပါတယ် ... :)
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 1, 2013 at 6:35 AM
ရင်ခုန်ရသူရဲ့ ကဗျာလေးက မိုးနတ်ရေးထားတာထက်တောင် လှသေးတယ် :P
မမရိုးမြေကျရေ...တကယ်ပဲ ထာဝရသူငယ်ချင်းလုပ်မှာလား ?
အသူရေ....ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးကမ္ဘာ :D
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) February 1, 2013 at 5:31 PM
ကိုယ်ပိုင်အလှတွေလဲ ဖွဲ့ဦးလေ။ သူများအလှတွေချည်း ဖွဲ့နွဲ့နေတော့တာဘဲ။း)
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 2, 2013 at 4:57 AM
ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ကိုကိုပိုပိုမောင်ကြီးးးးးးးးးးးးးးး :P
လရိပ်အိမ် February 2, 2013 at 9:12 AM
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 4, 2013 at 6:36 AM
ညလေးလဲ စနိုးလေးရဲ့ နံမည်အရင်းကို သိပ်သိချင်နေတယ်
မိုးနတ်ရေးထားတဲ့အထဲမှာ တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပါသွားတယ်ဆိုလို့လေ :)))